Rayson | 6 intshi spring umatilasi
URayson usethuthuke waba ngumkhiqizi ochwepheshe kanye nomphakeli onokwethenjelwa wemikhiqizo yekhwalithi ephezulu. Kuyo yonke inqubo yokukhiqiza, sisebenzisa ngokuqinile ukulawulwa kwesistimu yokuphatha ikhwalithi ye-ISO. Selokhu sasungulwa, sihlala sinamathela ekusungulweni okuzimele, ukuphathwa kwesayensi, kanye nokwenza ngcono okuqhubekayo, futhi sihlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphezulu ukuze sihlangabezane noma zedlule izidingo zamakhasimende. Siqinisekisa ukuthi umkhiqizo wethu omusha ongu-6 inch spring umatilasi uzokulethela izinzuzo eziningi. Sihlale silindile ukuthola uphenyo lwakho. 6 inch spring umatilasi Besitshala imali eningi kumkhiqizo we-R&D, okuvele ukuthi uyasebenza ukuthi sithuthukise umatilasi wasentwasahlobo ongu-6 amayintshi. Ngokuthembela kubasebenzi bethu abasungula izinto ezintsha nabasebenza kanzima, siqinisekisa ukuthi sinikeza amakhasimende imikhiqizo engcono kakhulu, amanani avumayo kakhulu, kanye nezinsizakalo eziphelele kakhulu. Siyakwamukela ukuthi usithinte uma unanoma yimiphi imibuzo.Izigaba zokwenziwa kwe-Rayson zihlanganisa izici ezilandelayo: ukukhetha indwangu nokuyikhipha, ukwenza amasampula, ukulungisa indwangu kuqala, ukusika, ukuthunga, nokuwashwa.